Video fiicni: Sida loo qas Multiple Videos on Mac / Win (Windows 10)
> Resource > Video > Video fiicni: Sida loo qas Multiple Videos on Mac / Win (Windows 10)
Hab wanaagsan oo wax ka bedel ama abuuro video waa in ay isu daraan kala duwan video clips. Waxaa laga yaabaa inaad dhowr qaybood ee filimada aad jeceshahay ama taxanaha TV oo aad rabto inaad iyaga isugu wada si aad ku raaxaysan karaan inay daawado iyaga. Waxaad sidoo kale isku daraan laga yaabaa in videos wada ujeedooyin madadaalada, mashaariicda ama abuuraya movie shakhsi oo hadiyad ahaan u qof.
Si qas videos mid, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) (Windows 8 taageeray) waxay kaa caawin kartaa. Waxa kale oo ay bixisaa xamuulka ah saamaynta free KMG ah si loo kobciyo aad videos. Marka aad dhamaysato video tafatirka, aad dhoofin karo video ee dhammaan qaabab loo jecel yahay, ciyaaro Qalabka telefoonada gacanta oo kala duwan, ama u gubato si DVD. Hadda free download this video xirfad fiicni iyo raacaan hoos ku hage ku saabsan sida loo qaso videos mid in Windows iyo Mac.
Easy in la isticmaalo Video fiicni: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Isku qas video ah / qaabab kala duwan oo la mid ah si ay u file a video weyn.
Ku biiro Direct aan dib-u-riixo ama khasaaraha tayada.
Bixi video-guurka ee kala duwan iyo saamaynta kale si kor loogu qaado aad video.
Si fudud Samee Picture-in-sawir video (si kale oo lagu qaso videos). Wax dheeraad ah >>
Dhoofinta video ah saxar qaabab kala duwan, si toos ah Uploads online ama gubi in DVD.
OS taageerayaan: Windows (Windows 10 ka mid ah) & Mac OS X (ka sarreeya 10.6).
1. Ku dar video files si fiicni video ah
Si qas videos, waa inaad marka hore guji "Import" in ay doortaan files ka your computer ama si toos ah jiidi oo hoos u files si User ee Album. Qaabab video oo joogto ah, sida MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, 3G2, MOV, F4V, M4V, Mpg, MPEG, TS, TRP, M2TS, MTS, TP, DAT, wmv, MKV, ASF, DV, mod, NSV, TOD, EVO, iwm si fiican u taageeray.
2. Deji xigxiga iyo qas videos wada
Ka dib markii ay soo degida faylasha video barnaamijka, iyaga si toos ah u jiidin track video ah. Markaas waxaad sameyn kartaa isku xigxiga file video ah. Si aad u samayn, kaliya dooro video bartilmaameedka kadibna clip ka tagay ama xaq u leedahay in meel la rabay aan sii daayo button jiirka. Marka aad sii daayo button mouse ka, waa la bedeli doonaa clip video booska ka. Ka dib markii in, aad ku dhuftey karaa "Abuur" iyo qas badan videos galay mid ka mid ah waaweyn muuqan.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha daboolaa mid file in kale, ama aad u kala qaybsan tahay doonaa faylka laba qaybood.
3. Ku dar kala guurka (optional)
Waxa kale oo aad ku dari kartaa kala guurka oo u dhexeeya video clips in la sameeyo video guuro dheeraad ah si habsami leh mid ka mid ah ee soo socda. Si tan loo sameeyo, riix badhanka-guur ah, dooro mid ka mid ah kala-guurka ee la heli karo iyo waxa ay soo jiitaa-iyo-hoos u meeshii loo baahan yahay ee Jadwalka ka.
4. dhoofinta video cusub
Marka aad dhamaysato hawlaha kor ku xusan, guji "Abuur" si loo badbaadiyo files mideeyey. Haddii aad rabto in aad badbaadin video qaabab kale oo ku saabsan computer deegaanka, waxaad riixi kartaa "qaab" iyo doorato qaabka aad jeceshahay in aad wax soo saarka. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari video abuurka on iPod, iPhone, iPad, iwm, guji "Device" dooro thumbnail ee qalabka aad.
Video Tutorial: Sida loo qas Multiple Video Files galay Mid ka mid ah
Sida loo qas HD iyo SD Video Files